Imewe maka imepụta (DFM) Service-Kingford
Kedu nke ka mma na PCB DFM vs. PCB DFA?
Ọ bụ ọrụ dịịrị a PCB n'ichepụtaọrụ iji chepụta PCB gị n'ụzọ dị mma. Zọ nke ọ nwere ike belata mmefu niile na nsogbu ndị ọzọ dị mkpa DFM. N'ihi ya, ihe a niile ga-ekwe omume site na ịhọrọ nke zuru oke PCB imewe ọrụ zuru oke Nyocha PCB DFM.
All researches na-egosi na 70-80% nke n'ichepụta mkpụrụ na ogo nke atụmatụ gị na-enweta naanị site na aghụghọ, ọ bụghị site n'ichepụta ihe. Ọzọkwa, ịchọta na idozi njehie imewe mbụ nwere ike ịdị oke ọnụ yana iwepụta oge.
Onye mmebe ma ọ bụ nrụpụta nwere ike ịmepụta ezigbo PCB na ogo yana ọnụahịa site na isoro ntuziaka DFM mgbe niile. Anyị ọkachamara PCB DFM ọrụ na nwere ike inye gị,
PCB DFM ngwaọrụ nwere ike ịmepụta obi gị PCB aghụghọ;
Best PCB DFM ule na ndenye maka ịchịkwa nile di iche iche nke DFM mbipụta.
Nke anyi Nyocha PCB DFM ọrụ nwekwara ike ịmata ihe niile PCB imewe mbipụta na ọsọ ọsọ na-aga n'ihu. Anyị amara PCB DFM ọrụ dị oke mma nke ị nwere ike ịdabere na nsogbu DFM gị niile. Gị PCB dị mkpa na-ewuli na n'ibu mkpa.
Gịnị bụ a Nyocha PCB DFM ọrụ?
Ọ bụrụ na anyị na-atụle ya na broadest okwu mgbe DFM pụtara Design for Manufacturability. Ọzọkwa, DFM na-anọchitekwa maka Kere maka Nrụpụta. Ihu ọma, ọ bụ a pụrụ iche usoro nke emebe ngwaahịa proactive na purposely ka mma niile atụmatụ nke n'ichepụta.
Ọzọkwa, n'ime ya, mmadụ nwekwara ike melite ụzọ nke ịkpụzi ọgwụ site na iji nyocha DFM na ule. N'ezie, ọ bụ otu usoro atụmatụ nke enyere ndị nrụpụta aka iji hụ na arụpụta bọọdụ PCB.
Ọ bụ a dị nnọọ mkpa usoro na-enyere aka izere ọtụtụ okwu na ikpeazụ ogbo nke gị PCB mmepụta. N'ezie, nke kachasị mmaNyocha PCB DFM ọrụ nwere ike inyere gị aka mma gị niile PCB aghụghọ prototype na ị chọrọ inwe naanị site na mbụ Mee atụ ogho.
Ma PCB DFM na DFA dị mkpa ka kwesịrị chepụta gị PCB mbadamba. Ha nwere mkpa ha na ụkpụrụ ha n'ịmepụta ụdị PCB zuru oke.
DFM bu usoro eji ahazi ihe PCB nile iji hazie nsogbu DFM
● Okwu ndị nwere ike ime n'oge PCB ationgha na PCB nzukọ
● Ọzọkwa, ọ na-akwado ọtụtụ ugboro ugboro na PCB aghụghọ
Mana ọ na - enyere ndị na - emepụta aka aka na mbido nke mmepụta
Fact N'ezie, nsogbu DFM niile metụtara PCB geometry
● A mbipụta ukwuu n'ime aga-adịghị ahụ anya n'oge DFM ndenye ego
● ieslọ ọrụ dị iche iche na-eji sọftụwia DFM kachasị achọpụta ha nke ọma
● N’ụzọ bụ isi, DFA bụ ngwa ọrụ bara uru nke ndị nrụpụta na-eji ahọta ihe kacha mma
● Ha na-ahọkwa usoro kachasị mma iji mepụta ngwaahịa ha
● DFA na-anọchi anya PCB Design maka Assembly
Ọ dị oke mkpa maka OEM
● DFA na-enye aka belata usoro ngwaahịa
● O nwekwara ike belata mmefu mmepe
Ọzọkwa, DFA na-ejidekwa n'aka na nsonaazụ kachasị mma rụpụtara ọbụna site na usoro izizi
Kedu Nyocha PCB DFM na-enye aka?
Nyocha PCB DFM ga-enyere aka izere iji oge gị yana ego. N'ihi na ọ na-edozi mmejọ niile na ngalaba injinia na imepụta ihe na mbido usoro mbụ.
Ọzọkwa, DFM na-eduzi gị iji gbochie nrụzigharị dị oke ọnụ dịka ọ na-achọpụta ma dozie nsogbu niile tupu nrụpụta ikpeazụ. The DFM analysis injinia na-pụrụ iche ọgwụ ịkpụzi ọzụzụ. Ya mere, ha nwere ikike ịchekwa oge na ego gị dị oke ọnụ site na ikpebi:
➢ ọnụahịa arụmọrụ nke nwere ike belata ụgwọ ọ bụla
➢ irè na ngwaahịa ndị na-eme ka akụkụ dị mma yana usoro dịkwuo mma
➢ ihe ngwọta na nsogbu ndị nwere ike ime maka ịkpụzi akụkụ oge n'oge imewe ahụ
➢ mgbanwe imewe pụrụ iche nke akụkụ iji mee ka ngwaọrụ dịkwuo mma.
Ọzọkwa, Nyocha PCB DFM na-achọpụta ohere kachasị mma iji mepụta ihe ndị kwesịrị ekwesị.
Dị Oké Mkpa Nyocha PCB DFM ngwaọrụ maka mfe PCB aghụghọ
Maka nhazi PCB zuru oke ma dị mfe, ọ dị ezigbo mkpa ịhọrọ ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị. Ọzọkwa, tupu ịmalite agba ikpeazụ PCB n'ichepụta usoro, ị kwesịrị ịtụle ihe niile dị mkpa. Okwu ndị ahụ nwere ike imetụta ọnụahịa, ogo, ịrụ ọrụ nke mbadamba PCB gị.
N'ihi na ngwaọrụ ndị a niile na-enyere aka melite ọkwa nke arụmọrụ PCB. Yabụ, họrọ mgbe niile ị ga-arụpụta ihe eji arụ ọrụ. Gbalia mgbe nile itughari ihe nile di nkpa nke puru imetuta ihe ngwuputa gi na PCB.
Mostfọdụ ngwaọrụ dị mkpa bụ:
● ịlele gị PCB aghụghọ n'ihi na ndidi.
Na-enyocha ihe na-ezighị ezi mgbe niile;
● gbalịa iji nchịkọta dị iche iche nke CAD maka atụmatụ PCB gị dị iche iche;
● na-eme ka ihe omume dị mkpa dị oke mkpa ma e jiri ya tụnyere mmụta mmụta
N'ezie, ị kwesịrị ị na-ama nke ahụ zuru oke Nyocha PCB DFM ngwaọrụ ga-enye gị nzaghachi ziri ezi. Ọzọkwa, site n'inyocha nzaghachi a, ị nwere ike ịgbanwe echiche PCB ngwa ngwa gị.
Kedu ihe dị mkpa anyị nwere Nyocha PCB DFM ndị injinia nwere?
Ndị ọrụ injinia anyị nwere ọkaibe ma nwee ọkaibe. Ọzọkwa, ha nwere nkà zuru oke iji dozie nsogbu gị niile metụtara
Nhazi PCB na imewe
Ọdụdọ Circuit Ọdụdọ
Design Eletriki Packaging Design
Njikota na USB Design.
Ọbụghị naanị na imepụta kamakwa ha nwere nka zuru oke.
Engineering Nyocha Injinia
Engineering Injinia Akụrụngwa
Engineering Imepụta Injinia
Engineering Injinia ihe arụ.
Gịnị kpatara anyị Nyocha PCB DFM ọrụ dị mkpa?
N'ezie, enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti nhazi abụọ, dịka ọmụmaatụ,
Emebe na ihuenyo;
Emebe maka n'ichepụta ikpeazụ.
Ọzọkwa, ọ pụtaghị na nhazi nke ị na-emechi na ihuenyo kọmputa ga-emerịrị nke ọma mgbe ị rụpụtara. Nke anyiNyocha PCB DFM Ndị otu nwere ahụmịhe dị ukwuu n'ịchọpụta nsogbu ndị a dị mkpa, dị ka,
● solder nkpuchi;
● akara obosara;
Kedụ ka anyị nwere ike isi nyere gị aka?
N'ezie, ndị ọkachamara anyị nwere ike inyere gị aka inyocha ihe ndị dị mkpa maka usoro mmepụta ihe. Yabụ, ọtụtụ ihe na-abanye n'ime imewe maka ebumnuche nke imepụta ya bụ ndị a,
√ Nguzogide mmiri
Wave Ntinye aka na redio
Awareness Nghọta gbasara ohere gbasara ọdịmma na nhazi
Ihe mgbochi na-ebute ihe na mpụga.
Anyị bụ ndị otu kachasị mma ma nwee nnukwu mmụọ iji dozie ihe niile PCB emebeokwu. Ọzọkwa, anyị nwekwara ndị ọrụ nwere ahụmịhe nke ndị ọkachamara na ndị injinia ruru eru nke ukwuu.
Yabụ, site n'inweta uru anyị Nyocha PCB DFM ọrụ, ị nwere ike ụgbọala gaa na a oké ihe ịga nke ọma kwupụta gị PCB DFM.
Maka ọrụ Mgbakọ anyị chọrọ ndị ahịa ka ha nye BOM na Gerber faịlụ, ndị a dị mkpa iji nye ọnụahịa ziri ezi yana kwa maka ọnụego mgbakọ nke PCB. Biko zitere anyị dị ka mgbakwunye email. sales@kingfordpcb.com